နက္ခတ်ဗေဒင်အရ သင့်ရာသီခွင်လက္ခဏာရဲ့ စွမ်းအင်အရောင်များ - Lifestyle Myanmar
စွမ်းအင်အရောင်ဆိုတာဘာလဲ? စွမ်းအင်အရောင်တွေဆိုတာ စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးတဲ့၊ တချို့လုပ်ရပ်တွေရဲ့ ဖြစ်တန်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ပေးတဲ့ သင်ဝတ်ဆင်နိုင်သော အရောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (သို့) အခါသမယပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ရောင်တည်းဝတ်ဆင်တာက တခြားအရောင်တွေအများကြီး ဝတ်တာထက် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
စွမ်းအင်အရောင်တွေက ရာသီခွင်လက္ခဏာတိုင်းအတွက် အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီခွင်အရောင်တွေက သင့်လက္ခဏာရဲ့ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကို တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သက်ရောက်မှုကို ခံစားဖို့ အဲဒီ့အရောင်တွေကို နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်ဖို့ မလိုပါဘူး၊ ဒီအရောင်တွေက သင့်ရဲ့ သဘာဝအရည်အသွေးကို ဆောင်ကြဉ်းဖို့သာ ရည်ရွယ်ပါတယ်၊
၁။ မိဿရာသီဖွား ( မတ်လ ၂၁ မှ ဧပြီ ၁၉)
အနီရောင်ဟာ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ဖန်တီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သင်ဟာ မီးသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် အနီရောင်နဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီ အနီဆိုးခြင်း (သို့) အနီရောင်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ခြင်းက အခန်းထဲမှာ သင့်ကို အကြည့်အများဆုံး ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်း သင့်ကိုသမင်လည်ပြန်ကြည့်စေမယ့် အရောင်လား? ဒါက သင့်အတွက် ရယ်စရာပါ။
အခန််းထဲမှာ အနီရောင်ခြယ်ပြီး အနီရောင်လိုက်ကာ ကာခြင်းက သင်နဲ့ သင့်လက်တွဲဖော်အား ရင်းနှီးသော အချိန်လေးတွေ ရရှိစေပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် အင်တာဗျူးနေစဉ်အတွင်း ပိုမိုအားကောင်းလာစေဖို့ အနီရောင်ကို ဝတ်ဆင်ပါ။
၂။ ပြိဿရာသီဖွား (ဧပြီ ၂၀ မှ မေ ၂၀)
ပြိဿရေ့ ..မင်းအရောင်က အစိမ်းရောင်ပါနော်။
အစိမ်းရောင်က ပင်ကိုယ် သဘာဝဆန်တဲ့ သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ သင့်ရဲ့ လက္ခဏာက Earth sign ဖြစ်တာမို့ ဒီအရောင်က သင့်အတွက် perfect ဖြစ်စေပါတယ်၊ သဘာဝ ကဲ့သို့ပဲ သင်ဟာ တည်ငြိမ်တယ်၊ စိတ်ရှည်တယ်၊ အမြဲတမ်း တိုးတတ်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တိုးတတ်ပြောင်းလဲပြီး တည်ငြိမ်တယ်လို့ ခံစားရဖို့ အစိမ်းရောင် ဝတ်ဆင်ပါ။
၃။ မေထုန်ရာသီဖွား ( မေလ ၂၁ မှ ဇွန် ၂၀)
အဝါရောင်က သင့်လိုပဲ တတ်ကြွပြီး အသံကျယ်ပါတယ်။ သင်ရဲ့စပ်စုတဲ့ သဘာဝနဲ့ တခြားသူတွေကို လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းက အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ ရှု့ထောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုက နေကို ပျော်ရွင်မှုနဲ့ ပျော်ရွင်မှုရဲ့ အရင်းအမြစ်လို့ မှတ်ယူကြပါတယ်။ ဒါက သင်ဟာ နေရဲ့ သဘောတရားကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ သင့်အတွေးဖြစ်စဉ်တွေကို တိုးမြှင့်စေဖို့ အဝါရောင်ကို ဝတ်ဆင်ပါ။
၄။ ကရကဋ်ရာသီဖွား (ဇွန် ၂၁ မှ ဇူလိုင် ၂၂)
ကရကဋ်တွေရဲ့ စွမ်းအင်အရောင်က အဖြူ (သို့) ငွေရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဖြူရောင်က ချိုးငှက်ရဲ့ တောင်ပံတွေနဲ့ တူပြီး ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်က ငွေလရဲ့ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုလို သင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကျေးဇူးကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ သင်ဟာ နားလည်မှုနဲ့ လက်ခံမှုရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ ကရကဋ်ဟာ အချစ်ရဲ့အယူအဆကို ကိုယ်စားပြုပြီး ထိုအရောင်တွေက သင့်အား ချစ်ခြင်းမေတ္တာစီးဆင်းမှုနဲ့ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ဖို့ ကူညီပါလိမ့်မယ်၊ သင့်ရဲ့ နားလည်မှုနဲ့ သိမ်မွေ့နူးညံ့မှုကို တိုးပွားစေဖို့ အဖြူရောင် (သို့) ငွေရောင်ကို ဝတ်ဆင်ပါ။
၅။ သိဟ်ရာသီဖွား (ဇူလိုင် ၂၃ မှ သြဂုတ်လ ၂၂)
လီယိုရဲ့ စွမ်းအင်အရောင်က ရွေရောင်ပါ။
ဘုရင်တစ်ပါး(သို့) ဘုရင်မတစ်ပါးလို ရွှေကို ဝတ်ဆင်ခြင်းက သင့်အား ခွန်အားနှင့် အပြုသဘောကို ဆောင်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရွေလက်ဝတ်ရတနာတွေက သင့်အား စွမ်းဆောင်နိုင်ရုံသာမက သင်မှာရှိပြီးသားထက်တောင် ပိုပြင်းထန်စေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရွှေလက်ဝတ်ရတနာတွေရဲ့ တောက်ပမှုက အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရရှိစေရုံသာမက သင့်ရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍန်ကို တော်ဝန်ဆန်စေပါတယ်။ စွမ်းအားတစ်ခုပေးဖို့ ရွှေကို ဝတ်ဆင်ပါ။
၆။ ကန်ရာသီဖွား (သြဂုတ် ၂၃ မှ စက်တင်ဘာ ၂၂)
ကန်ရာသီလေးရေ့… မင်းရဲ့အရောင်က အစိမ်းရောင် (သို့) အညိုရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ ဂရုတစိုက်နဲ့ ဆန်းစစ်လေ့လာမှုတွေရှိပြီး ဒီအရောင်တွေက တည်ငြိမ်မှုနဲ့ ကြီးထွားမှုကို ကိုယ်စားပြုပါတယ် သင့်ကိုယ်သင် ကြီးပွားဖို့နဲ့ တိုးတတ်ဖို့ ကူညီခြင်းဟာ သင့်အတွက် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ တချို့ဒေသတွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတတ်မှုပေါ် အာရုံစိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါက ဒီအရောင်တွေကို ဝတ်ဆင်ပါ။
၇။ တူရာသီ ( စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ အောက်တိုဘာ ၂၂)
တူရာဿီရဲ့ စွမ်းအင်အရောင်က ပန်းရောင် (သို့) အပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအရောင်တွေက သင့်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စရိုက်ကို ပျော့ပြောင်းသွားစေပါတယ်။ ဒီအရောင်တွေက သင့်နဲ့ Friendly ပိုဖြစ်ပုံရတယ်။ ပန်းရောင်က သင်ဘယ်လောက် ချစ်ခင်ပြီး ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေစဉ်မှာ အပြာရောင်က တည်ငြိမ်မှုရဲ့ အနှစ်သာရကို ယူဆောင်ပေးပါတယ်။ မိတ်ဆွေပိုဖြစ်လိုပါက ဒီအရောင်တွေကို ဝတ်ဆင်ပါ။
၈။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား (အောက်တိုဘာ ၂၃ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၁)
ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားရဲ့ စွမ်းအင်အရောင်က အနက်ရောင်ပါ။
အနက်ရောင်က သင့်ရဲ့ တည်ရှိမှုစွမ်းအားကို တိုးစေပြီး သင့်ရဲ့နားလည်ရခက်တဲ့ သဘာဝကို တိုးပွားစေပါတယ်။ အနက်ရောင်က သင့်စိတ်ဝိဉာဉ်က ဘယ်လောက်နက်ရှိုင်းတယ်ဆိုတာကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး မမြင်ရသော မျက်လုံးတွေမှ မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သို့သော် ဒါက သင့်အားအရာအားလုံးကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ သင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော အနှစ်သာရကိုတိုးမြှင့်ပြီး သင့်ရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောဆင်ခြင်မှုကို တိုးမြှင့်လိုပါက အနက်ရောင်ကို ဝတ်ဆင်ပါ။
၉။ ဓနုရာသီဖွား (နိုဝင်ဘာ ၂၂ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၁)
ဓနုရာသီတွေရဲ့ စွမ်းအင်အရောင်က ခရမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ပွင့်လင်းတဲ့ စိတ်ရှိခြင်းက သင်လို ခရီးသွားတွေအတွက် အရေးကြီးပါတယ်၊ ခရမ်းရောင်ဟာ ပွင့်လင်းသောစိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ခရီးသွားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘဝက ထင်မြင်ချက်၊ အမြင်တွေ များများစားစား ယူဆောင်လာတာကို သိထားရပါမယ်။ ထို့ကြောင့် ဒီကွဲပြားခြားနားမှုအားလုံးကို ခံယူပြီး နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းက သင့်စရိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပွင့်လင်းသောစိတ်ကို ကျယ်ပြန်လာစေဖို့ ခရမ်းရောင်ကို ဝတ်ဆင်ပါ။
၁၀။ မကရရာသီဖွား (ဒီဇင်ဘာ ၂၂ မှ ဇန်နဝါရီ ၁၉)
မကရရာသီဖွားရဲ့ စွမ်းအင်အရောင်က အညို (သို့) မီးခိုးရောင်ပါ။
ရိုးရာဆန်ပြီး ရိုးရှင်းတာက သင့်လူနေမှုပုံစံရဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရောင်တွေက ပျင်းစရာမကောင်းပါဘူး၊ ဘယ်setting အတွက်မဆို ထိရောက်စွာ လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရောင်တွေရဲ့ လက်တွေ့ကျမှုက ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ် ဘဝပုံစံရဲ့ အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်။ သန်မာပြီး လက်တွေ့ကျအောင် ဒီအေရောင်တွေကို ဝတ်ဆင်ပါ။
၁၁။ ကုံရာသီဖွား (ဇန်နဝါရီ ၂၀ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈)
ကုံရာသီရဲ့ စွမ်းအင်အရောင်က အပြာရောင်ပါ။
သင်ကိုယ်တိုင်က အငြိမ်မနေတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ခုတည်းပေါ်သာ အာရုံစိုက်နိုင််ခြင်းက အရမ်းခက်ခဲပါတယ်၊ သို့သော် အပြာရောင်က သင့်ရဲ့ ဂနာမငြိမ်သော စွမ်းအင်ကို သက်သာအောင် ကူညီပေးတာကြောင့် သင့်ရဲ့ အရွေ့မြန်နေတဲ့ စိတ်ကို လွှမ်းမိုးတိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ သင့်ရဲ့ ဆန်းကြယ်တဲ့ စိတ်ကူးတွေကို ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုကို လမ်းကြောင်းဖော်ဆောင်ဖို့လိုရင် အပြာရောင်ကို ဝတ်ဆင်ပါ။
၁၂။ မိန်ရာသီဖွား ( ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ရက်မှ မတ်လ ၂၀)
မိန်ရာသီဖွားရဲ့ ပါဝါအရောင်က အစိမ်းရောင်ဖျော့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ သဘာဝကုစားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အစိမ်းနုရောင်က သင့်ရဲ့သဘာဝစွမ်းရည်တွေကို တိုးတတ်စေပါတယ်။ အစိမ်းရောင်ဗားရှင်းက သင့်ရဲ့ကုသနိင်စွမ်းနဲ့ လှုံ့ဆော်မှုစွမ်းရည်ကို ထုတ်ဖော်ပြပါတယ်။ တကယ်လို့ တစ်ယောက်ယောက်ကို ငြိမ်သက်မှုရှိစေဖို့နှင့် ငြိမ်းချမ်းမှုကို ယူဆောင်လာဖို့ လိုအပ်ပါက အစိမ်းနုရောင်ကို ဝတ်ဆင်ပါ။